I-20% yabantu abafuni ukususa igalaji kwaye bayonwabile ukwenzela yona - Nelju.cz
Yonke into embi ilungile
Ukhumbula enye yam nqaku yam kuqala, xa ndincoma intsebenziswano yam AAA auto? Ngenxa yokuba bakwazi ukugcina enye yabaxumi babo, ndakwazi ukwenza into eninzi kwaye ndikholelwa ukuba ayikuphela! Ndiyabulela kule nqweliso, ndiyakwazi ukubeka imoto yam emimeni ukuze ilungiswe kwaye andifanele ndixhalabele xa kuya kwenziwa. Phakathi, ndiyakwenza ikhefu elihle ngedolophu ngokuhamba. Ndiza kuxabisa uncedo lwakhe kwinkampani yam, apho angandithwala khona iipellets of cans and granules kunye ekugqibeleni kodwa kuncinci kukwabanceda kwimisebenzi yam yerenti. Ngoko yonke imisebenzi iyazalisana.
Akuyena wonke umntu onako okanye ufuna ukucoca i-junk
Yintoni eyenza ukuba ishidi elimhlophe lincede kum? Ngexesha elide ndinalo banokuvuma ukuthenga igaraji elingazange lisuswe. Kwenzeka ukuba kunye nomnini ongeyisebenzisi loo ndawo yokuhlala, umzekelo, ngaphezu kweminyaka engamashumi amabini, sivula umnyango kwaye umfesane awubonakali ukuphuma. Ujonge njengenqatha, ndibukeka njengeveki kwaye ngokuqinisekileyo ndiyabona ukuba akafuni ukwenza oku. Kodwa oko akusebenzi kum kuba ndifuna ukuba ngumntwana njengomqokeleli wezinto ezilahlayo kunye nobawo bathanda ukuthatha yonke into engacacanga kunye nento engenamsebenzi. Ngoko ngelixa umnini wale msila ephuma emigodini kwaye ecinga indlela engcono yokumlahla ngayo, i-geni yam iyalela ukuba ndidibe kuyo, kungcono ukuba ungabi nelo holide yesizwe okanye uphile!
Bangaphi abantu abaxhasi be-karnumx egalaji?
Ukuba nemoto enhle kwezo buncwane ngokuqinisekileyo uhlawula! Kuzo zonke iigaraji ze-10, malunga ne-2 kwimeko apho umninimzi wabo uya kubamba khona. Okanye impumlo? Naliphi na, le yinto enye enokuchaphazela intengo yokuthenga igaraji. Kwakhona, andiyikubona ngubani othengisa ipropati kum. Ingaba kukho ipinki ekhethiweyo engacinezeli ngezandla zomsebenzi, umntu ongenalo ixesha lokulungiselela into enjalo, okanye umfazi ongenandaba nokuba umntu uyalela okanye undigodla ibhinki kwixabiso lokuthenga. Nangona kunjalo, ndikholelwe, uthatha i-humus awuyi kufuna indawo yakho. A iloli alinayo nayiphi na.
Indlela le ntsebenzo eqhuba ngayo
Ngokona nxalenye, ininzi ayiqhubekanga. Njengoko ndabhala kumhlathi odlulileyo. Abathunywa baninzi kangangokuba imeko iyenzeka nje. Enyanisweni, andizange ndize ndizame nzima, ndihlala ndibuza ... uya kucima igaraji? Uninzi lwabantu lujika amehlo abo, okanye benza ubuso obunjalo kum. "Uthetha ukuthini ngokubalulekayo?" Ngoko ndincoma "Ngaba ufuna ukuyilahla? Ngaba uza kundenza ixabiso elingcono? "Kwaye kunjalo.
Ngokucacileyo, isivumelwano asiyi ku "hamba", kodwa siya kusulwa ukuze sicacise le ntengiso ukuze ingaphazamiseki. Zonke iziganeko ezinokuthi zenzeke zixoxwa kunye negqwetha elithi, ngokombono wam, lunceda ukwenza isivumelwano. Ngokubhekiselele ekutshintshelweni kwento yokugada yegaraji, iphathwa ngolu hlobo lulandelayo:
... ukuba nayiphina impahla ehambisayo idluliselwe kumthengi ngomhla wokunikezelwa kwipropati echaphazelekayo iya kudluliselwa ngaphandle kwentlawulo kumthengi kwaye umthengi unelungelo lokulahla ngokuqonda kwalo.
Okanye kusenokuba nzima
... lo mzuzu umthengi unelungelo lokuba ukuthumela loo isiqulatho ukuqashisa deal ngokwengqiqo yalo, ingakumbi, sebenzisa oko, bonwabele, ukulahla, ukulahla, kuquka intshabalalo yayo.
A kuba awuzange ukwazi ukuba kwenzekani kwigaraji, nokuba ingaba indawo yokucima abaphangi, okanye xa umntu engazange aye kwi-gingerbread, Ngokuqinisekileyo akuyikunyanga le nto nolu khetho.
... Amaqela ngokucacileyo baxele ukuba kwimeko echazwe kumhlathi ongaphambili umthengi akukho ukufumana kuyo nayiphi na imeko ipropathi yakhe nawuphi na izinto ngobuqili okanye inkohliso kodwa zityalwa kunye nokuzimisela kumacala omabini.
oku kusenako ukuqinisekiswa. Kubuhlungu bombhozo yendlela izinto ezinokuphathwa ngayo kwaye ngokukodwa ukuba zihlawulele ukujongana nazo.
Ngaba kufanelekile umzamo?
Kuthiwani ngaloo nto? Ininzi yayo ibheka amawaka ambalwa amanani aphantsi, ngoko ke uyahlawula, nangona loo ndolozo ihlawulwa yi-brigade.
igaraji njengotyalo-mali, isivumelwano sokuthenga, ukuthenga igaraji, ukuqeshiswa kwezindlu zangaphandle
Iingxelo ze-2 "I-20% yabantu abafuni ukucima igalaji kwaye bayavuya ukwenza oko"
Petr Majer wabhala wathi:
4.9.2017 (17: 34)
Ngomso mva, ndiyakwazi ukubuza indlela ozimisele ngayo ukunikela ngokubalulekileyo xa ugqiba isivumelwano. Ngoko, ekupheleni kwesivumelwano, izitshixo ezisuka kwigaraji zivuthiwe kwaye zivaliwe kwiigaraji?
1.10.2017 (14: 35)